एउटै जोडीको दुईपटक बिहे ! – Chitwan Post
एउटै जोडीको दुईपटक बिहे !
भरतपुर । भनिन्छ, जीवनमा एकपटकमात्रै गर्ने मह¤वपूर्ण कार्य भनेकै घरबार जोड्नु हो । तर, चितवनमा एउटै जोडीले करिब एक वर्षमै दुईपटक विवाह गरेका छन् । चितवनका लोकबहादुर थापामगर र स्याङ्जाकी रेखा विश्वकर्माले विवाह गरेको १४ महिनापछि फेरि विवाह गरेका हुन् ।
बुधबार भरतपुरस्थित मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको आयोजनामा मगर र विश्वकर्मा जोडीले दोस्रोपटक विवाह गरेका हुन् । यो जोडीको काखमा पाँच महिनाकी छोरी छिन् ।
केन्द्रकी अध्यक्ष मञ्जु खाँड, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालासहित सीमित सामाजिक अगुवाहरुको उपस्थितिमा टीका लगाएर दोस्रोपटक विवाह गरिएको हो । विवाहमा दुवैजनाले एकअर्कालाई टीका र माला लगाइदिएका थिए ।
कसरी भयो दुईपटक बिहे ?
करिब तीन वर्षअघि लोकबहादुर र रेखाबीच चिनजान भएको थियो । लोकबहादुरका अनुसार आफन्त भेट्न जाँदा स्याङ्जामै रेखासँग भेट भएको हो । त्यसपछि दुई जनाबीचमा आकर्षण बढ्दै गयो । करिब डेढ वर्षसम्मको बोलचाल र प्रेम सम्बन्धपछि गत वर्ष असार ३ गते दुई जनाले आफूखुसी नयाँ जीवनको सुरूवात गरे । त्यतिबेलासम्म दुवैजनाले सोचेका थिए, समाज परिवर्तन भइसकेको छ । तर, भइदियो सोचविपरीत । नयाँ दुलही बनाएर भिœयाउन भनेर घर लिएर गएकी रेखाले छिःछिः र दूरदूर सहनुप¥यो ।
परिवारले आश्रय दिनुको साटो केटा र केटीलाई छुटाउन विभिन्न बहाना बनाउन थाले । त्यसपछि आफ्नै घरमा असुरक्षित महसुस गरेर लोकबहादुरले श्रीमतीलाई काठमाडौँ लगेर राख्ने निर्णय गरे । उनी चार महिना काठमाडौँ बसे । स्याङ्जा माइती जान–आउन नजिक पर्ने भनेपछि श्रीमतीको चाहनाअनुसार पोखरा सरे । त्यतिबेलासम्म रेखाको पेटमा प्रेमको निशाना हुर्किन थालिसकेको थियो ।
यही क्रममा लोकबहादुरलाई उनकी आमाले पैसा चाहियो होला, लिन आइज बाबु भनेर बोलाइन् । आमाको मन पग्लिएछ भनेर खुसी हुँदै श्रीमतीलाई ‘एक रात बसेर फर्किहाल्छु’ भन्दै लोकबहादुर चितवन आए ।
तर, आमाको योजना छोरालाई पैसा दिनु नभई बुहारीसँग छुटाउनु थियो । पोखराबाट आएकै राति सुतिरहेकै अवस्थामा लोकबहादुरलाई मध्यरातमा चार जना मान्छे बोलाएर सीधै लागूऔषध सुधार केन्द्रमा पु¥याइयो । ‘मलाई किन यहाँ ल्याएको ? मेरी श्रीमती गर्भवती छिन्, मलाई कुरेर बसेकी छिन्’ भनेर आग्रह गर्दा पनि उनलाई बाहिर जान दिइएन ।
‘म कुनै पनि लागू पदार्थ सेवन नगर्ने मान्छेलाई पनि लागू पदार्थ दुव्र्यसन केन्द्रमा ल्याएर राखियो’, आजभन्दा आठ महिनाअघिको घटना सुनाउँदै उनले भने, ‘यता मेरो अवस्था यस्तो छ, उता श्रीमती के गर्दै होलिन् भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो । श्रीमतीलाई फोन सम्पर्क गरौँ भने पनि माध्यम नै टुटाइदियो ।’
सुधार केन्द्रमा उनले घर जान पटकपटक आग्रह गरे । तर एक हप्ता, १० दिन, १५ दिन, एक महिना भन्दै आठ महिना बित्यो, छाड्ने सुर गरेनन् । त्यसपछि लोकबहादुरले भागेरै भए पनि बाहिर निस्कने योजना बनाए । बकर इदको दिन एकाबिहानै मौका छोपेर गेटको चाबी नै लिएर भागे । उनीसँगै अर्का एक जनाले पनि मौकाको फाइदा उठाए ।
त्यसपछि त्यही साथीको भाइले उनलाई पोखरासम्म जाने–आउने खर्चको व्यवस्था गरिदिए । उनी सीधै पोखरा हानिए । तर, उनले श्रीमतीलाई भेट्टाउन सकेनन् । घरभेटीलाई सोध्दा चितवन जान्छु भनेर हिँडेकै छ महिना भयो भन्ने उत्तर आएपछि चितवन फर्किएका उनले ८ महिनापछि मंगलबार राति आफ्नी श्रीमतीलाई भेटे ।
रेखाले कसरी बिताइन् ८ महिना ?
श्रीमान्लाई सुधार केन्द्रमा राखेको कुरा रेखालाई थाहै भएन । एक रात बसेर फर्किहाल्छु भनेर घर आएका श्रीमान् ९ दिनसम्म पनि नफर्किएपछि आमालाई साथमा लिएर रेखा पनि चितवन आइन् । तर, श्रीमान्को अत्तोपत्तो नै पाइनन् । घर जाँदा सासू र नन्द–अमाजूले जातीय विभेदको विषयलाई लिएर उनीमाथि दुव्र्यवहार गर्न थाले ।
टोल, समाज र सामाजिक अगुवाहरुको आग्रहमा परिवारले रेखालाई घरभित्र त पस्न दिएनन्, तर घरनजिकैको गोठमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए । त्यतिबेलासम्म उनको मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रकी अध्यक्ष मञ्जु खाँणसँग सम्पर्क भइसकेको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला प्रहरीमा उनले उजुरी दिइन् । श्रीमान्को खोजीमा आएकी रेखाले परिवारकै मिलेमतोमा लोकबहादुरलाई लुकाएको थाहा पाएपछि कानुनी प्रक्रियामा पुगिन् । यही क्रममा रेखालाई भने सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । र, छोरी जन्माइन् । छोरी जन्मिए पनि श्रीमान्बिनाको घरमा गएर बस्न सकिने अवस्था नरहेपछि मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रले बसोवासको व्यवस्था गरिदिने जिम्मा लियो ।
सोही केन्द्रमा बसेर केही दिनअघिमात्रै छोरीको भात खुवाइ कार्यक्रमसमेत आयोजना गरियो । तर, श्रीमान्को पीरमा दिनरात रूँदै बसेकी रेखाले मंगलबार राति आफ्नो श्रीमान्लाई भेट्टाएकी छन् ।
लागू पदार्थ दुव्र्यसनमा नफसेका आफ्ना श्रीमान्लाई सुधार केन्द्रले कसरी राख्यो भन्ने विषयमा भने रेखा अचम्ममा छिन् ! एकअर्काले श्रीमान्श्रीमती पाएपछि अहिले दुवैजना खुसी छन् । अब भने दुवैजना कोठा खोजेर बस्ने र सानोतिनो जागिर गर्ने योजनामा छन् । सँगसँगै जातीय विभेदविरूद्ध जागरण अभियानमा समेत जोडिने अठोट गरेका छन् ।
नविनालाई परिवारको जिम्मा
मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रले बुधबार ११ वर्षीय बालिका नविना माझीलाई समेत परिवारको जिम्मा लगाएको छ । घरमा काम गराउने भन्दै चितवन लिएर आएका आफन्तले नै श्रमशोषण गरेको जानकारी पाएपछि उद्धार गरेर राखेको केन्द्रले बालिकाको अभिभावकलाई जिम्मा लगाएको हो । नविनाले आफन्तको घरमा चार वर्षसम्म घरायसी काम गरेको खुलेको छ ।
२०७२ सालमा स्थापना भएको केन्द्रले हालसम्ममा ५२ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइसकेको केन्द्रकी अध्यक्ष मञ्जु खाँणले जानकारी दिइन् । केन्द्रमा अहिले २१ जना असहायले आश्रय लिइरहेका छन् ।